Wal Dhibdeen Yunivarsitii Wallaggaa Keessatti Dhalate Miidhaa Dhaqqabsiise
Guyyaa Sanbataa, gaafa Amajjii 7 bara 2012 wal-dhibdeen mooraa Yunivarsitii Wallaggaa keessatti ka’e barattoota irra miidhaa adda addaa geessisuu isaa, keessumaa barataan tokko rasaasaan miilla irra dhawamee Hospitaala Naqamtee galuu barataan kaan immoo Itti-aanaa Prezidaantii, kan Akkaadaamii Yunivarsitichaan jabaa reebamee kan hospitaalicha keessa du’aa jireenya gidduu jiru tahuu dubbatu barattoonni Yunivarsitichaa.
Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka ifatti himamu kan hin feene barattoonni kun, hoogganaan Waajira Poolisii Godinaa Wallagga Bahaa, Inispekter Olaanaa Getaachoo akka jedhanitti, barattoonni sun guyyaa Sanbataa sana akka nyaatni fooyyeffamuuf gaafachuun, nyaata didanii Kaafteriyaa Yunivarsitichaa duratti walga’anii dhaabatan.
“Yeroo sa’atiin tajaajila nyaata xumuramee kaafteriyaan cufamu waardiyyoonni Yunivarsitichaa rasaasa dhukaasanii nu bittimsuuf bobba’an. Eega barattoonni adda faffa’anii booda immoo, namni uffata gurraacha uffate tokko konkolaataa lakkoobsa taargaa 0065 OROMIYAA qabu keessaa bu’ee barataa doormii isaa dura barattoota kaan waliin dhaabataa ture, Leenjisaa Raggaasaa shugguxxiidhaan miila bitaa irra haleele” jedhu, barattoonni. Barataan sun battala Hospitaala Naqamteetti geessamee ka wal’aanamaa jiru tahuu dubbatu. Kan boorumtaa isaa ganama Itti-aanaa Prezidaantii Akkaadaamii Yunivarsitichaan akka hamaatti reebame barataan ka biraanis hedduu miidhamee, Hospitaala Naqamtee keessatti akka Oksiijiiniin lubbuun isaa keessa tursiisamee jiru illee nuuf ibsanii jiran, barattoonni Yunivarsitichaa. Barattoota kudhan akka hidhaman illee dubbatu.
Prezidaantiin Yunivarsitichaa, Proofeeser Fiqaaduu Beyyenee guyyaa lammataa waree-baada Awaasaa dhaa dhufee barattoota wajjiin marii geggeessuun haala sana qabbaneesse , jedhu. Proofeeser Fiquuduun telefoonaan quunnamnee akka waliin dubbachuu eegalletti, telefoonni nu irratti cufame. Booda deddeebisnee bilbillee iyyuu nuuf hin kaasne.
Hoogganaan Waajira Poolisii Wallagga Bahaa, Inispekter Olaanaa Getaachoo immoo, barattoonni sun waan dhagaa darbataniif jeeqamni ka’e. Barattoonni madaa’anis, kanneen hospitaala geessamanis, kanneen hidhamanis jiraachuu malu. Dhimma isaa qorataa jirra, jechuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennan.
Qophii isaa guutuu dhaggeeffadhaa